ओलीको कुरा सुनेर ताली पिट्नेहरू देखेर हैरान छु: प्रचण्ड :: Setopati
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एजेन्डा, क्रान्तिकारी विरासत र मुद्दाहरू माओवादीसँग मात्रै रहेको बताएका छन्।
यो घमन्ड र अहंकारको कुरा नभएको उनको भनाइ थियो।
‘केपी ओलीले जनताको सार्वभौम प्रतिनिधि सभालाई निर्ममतापूर्वक विघटन गरेकै हो। अहिले पनि उनले भन्छन्- पार्टीभित्र मलाई काम गर्न दिएनन्, झगडा गरे त्यसो भएर विघटन गरेको। पार्टीभित्रको झगडाले जनताको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ?’ उनले भने, ‘मनपरी आफू गर्ने? पार्टीभित्र बहुमत अर्कोतिर भएपछि उनले छोड्न पर्दैनथ्यो?’
ओलीले अहिले नैतिकताको कुरा गर्दै हिँडेको पनि उनले बताएका छन्।
‘अहिले उनले नैतिकताको कुरा गर्ने? मलाई त यति जलन भएको छ नि यस्ता मान्छे, पाखण्डी, डब्बल डिलर, ठगहरू चाहिँ अझै मान्छेलाई ताली पिटाउँदै हिँडिराखेका देखिन्छन्। यो ताली पिट्ने देखेर पनि हैरान हुन्छु म,’ प्रचण्डले भने।
उनले जनताको साथ लिन आफूहरू अगाडि बढेको बताए। ‘गठबन्धन पनि बनायौं हामीले जित्यौं,’ उनले भने, ‘तपाईं, हामी एक भएपछि कसैको केही लाग्दैन।’
उनले पार्टीका माथिका नेता विग्रेको पनि बताए। सूर्यनाथ यादवको ३६ औं स्मृति दिवसमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले अरूलाई आलोचना गर्नेभन्दा पनि आफू सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले जनतासँग पार्टीको सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्ने बताए।
उनले ओली श्री ५ जस्तै बन्न खोजेको पनि बताए।
‘ओली त्यस्ता मान्छे हुन् मलामी जाँदा पनि बाजा बजाउँदै नाच्दै हिँड्छन्। मान्छे दंग पर्छन्। बालुवाटारबाट बालकोट जाने भनेको हारेको, सन्नाटा भएर के गर्ने भनेर सोच्दै जानुपर्नेमा पञ्चे बाजा बजाएर, जितेजसरी गए। कति करोड खर्चेर मानिस बोलाएको थाहा पाएँ मैले, यस्तो नाटक गर्ने तिनी।’
साथै प्रचण्डले कार्यक्रम सक्नुअगाडि हाँस्दै भने, ‘यति नै कुरा भनौं, रिस उठेको छ केपीसँग।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ४, २०७८, १०:५७:००